MD Farmaajo oo waraaqaha Safiirnimo ka guddoomay labo DANJIRE (SAWIRRO) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxaa maanta Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjirayaasha cusub ee dalalka Hindiya iyo Nigeria ee Soomaaliya.
Danjiraha dalka India mudane Rahul Chabbra oo madaxweynaha la wadaagay farriin iyo salaan uu uga siday Ra’iisal Wasaaraha India mudane Narendra Modi ayaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay soo dhaweynta diirran iyo ilaalinta xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal.
Madaxweyne Farmaajo ayaa danjiraha cusub ee dalka India u rajeeyay inuu ku guulaysto gudashada waajibaadka diblumaasiyadeed iyo inuu ka shaqeeyo xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ay wadaagaan labada dal.
Danjire Chabbra iyo madaxweyne Farmaajo ayaa ka wada hadlay sidii labada dal u adkeyn lahaayeen xiriirka dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo ganacsiga iyo sidii shacabka Soomaaliyeed loogu fududayn lahaa dal-ku-galka India.
Dhanka kale, danjiraha cusub ee dowladda Nigeria u soo magcawday Soomaaliya mudane Vincent Omeokachie ayaa Madaxaweynaha la wadaagay salaan iyo farriin uu uga siday dhiggiisa dalka Nigeria Mudane Muxamed Bukhaari.